Ein verwandelnder Brief , Weltweite Kirche Gottes Schweiz (WKG)
Rasuul Bawlos wuxuu warqad u qoray kaniisadda ku taal Rome qiyaastii 2000 sano ka hor. Xarafku waa dhawr bog oo keliya, oo in ka yar 10.000 oo erey, laakiin saamayntiisu aad bay u weynayd. Ugu yaraan saddex jeer taariikhda Kaniisadda masiixiga, warqaddan ayaa dhalisay buuq weligiis ka beddelay kaniisadda si ka wanaagsan.
Waxay ahayd bilowgii qarnigii 15aad markii wadaad reer Augustin ah oo la odhan jiray Martin Luther uu isku dayay inuu xasiliyo damiirkiisa waxa uu ugu yeedhay nolol aan eed lahayn. Laakiin inkasta oo uu raacay dhammaan cibaadooyinka iyo qaynuunnadii amarkii wadaadnimadiisa, Luther weli wuxuu dareemay inuu ka go'ay xagga Ilaah. Kadib, iyada oo macalin jaamacad ah oo baranaya warqaddii uu u qoray kuwii reer Rooma, Luther wuxuu isu arkay inuu sharaxaad ka bixinayo sharaxa Bawlos ee Rooma 1,17:XNUMX: Waayo waxay (Injiilka) ku tusinaysaa xaqnimada Eebbe ka timid, oo ka timaada iimaanka iimaanka; sida qoran, Kii xaq ahu rumaysad buu ku noolaan doonaa. Runta meeshan xoogga leh waxay ku dhufatay qalbiga Luther. Wuxuu qoray:
Halkaas waxaan ka bilaabay inaan fahmo in xaqnimada Ilaah ay tahay tan ay kuwa xaq ahu ku nool yihiin hadiyadda Eebbe, oo ay tahay xaqnimada aan dhammaadka lahayn ee uu Ilaaha naxariista leh noogu caddeeyo rumaysadka. Halkaa marka ay marayso, waxaan dareemay inaan si buuxda u dhashay mar kale oo jannada gashay nafteeda albaabada furan. Waxaan u maleynayaa inaad ogtahay waxa ku xigay. Luther wuu ka aamusi kari waayey dib u helista injiil saafi ah oo fudud. Natiijaduna waxay ahayd Dib-u-habayntii Protestant.
Qalalaasaha kale ee sababay warqaddii ay u qortay reer Rooma waxay ka dhacday Ingiriiska qiyaastii 1730. Kaniisadda England waxay soo martay xilliyo adag. Magaalada London waxay ahayd meel kululaab badan oo khamriga lagu noolaado iyo nolol fudud. Musuqmaasuqu wuu baahsanaa, xitaa kaniisadaha dhexdooda. Wadaad da 'yar oo cibaadaysan oo Anglican ah oo magaciisa la odhan jiray John Wesley ayaa wacdiyey toobad, laakiin dadaalladiisu wax yar ayey yeesheen. Kadib, ka dib markii uu taabtay aaminsanaanta koox Masiixiyiin Jarmal ah oo ku soo qulqulaysa duufaantii Atlanta ee duufaantii Atlanta, Wesley waxaa lagu jiiday guriga shirarka ee Walaalaha Moravian. Wesley ayaa sidan u sharxay: Fiidnimadii waxaan aad u niyad jabsanaa shirkad ku taal jidka Aldersgate, halkaas oo qof ka akhriyey hordhaca Luther warqaddii uu u qoray Rome. Qiyaastii rubuc illaa sagaal, markii uu sharraxay isbadalka uu Eebbe qalbigiisa ku sameynayo rumaysadka Masiixa, waxaan dareemay in wadnahaygu si kulul u kululaaday. Waxaan dareemay inaan aaminay badbaadadayda Masiixa, Masiix oo keli ah. Oo waxaa laygu aaminay inuu dembiyadaydii iga qaaday, xataa dembiyadaydii oo uu iga xoreeyey sharciga dembiga iyo dhimashada.
Mar labaad, warqaddii ay u qortay reer Rooma waxay muhiim u ahayd dib u soo celinta Kaniisada iyada oo ay bilaabmaysay soo nooleynta wacdinta. Jahwareer kale, oo aan aad u fogeyn, ayaa na keenay Yurub sanadkii 1916. Intii dhexda uu ku qulqulayay dagaalkii koowaad ee adduunka, wadaad dhalinyaro Switzerland ah ayaa garawsaday inuu rajo wanaagsan ka qabo, aragtida xorta ah ee dunida masiixiga ah ee anshaxa iyo akhlaaqda leh. u dhowaanshaha kaamil ahaaneed xagga ruuxa ah oo ruxay dhammaan hilibka mala-awaalka ah ee galbeedka hore. Karl Barth wuxuu garwaaqsaday in farriinta injiilku ay u baahan tahay aragti cusub oo macquul ah marka laga hadlayo dhibaatooyinka cakiran. Faallooyinkiisii ​​uu ku qoray “Letter to the Rome”, oo lagu daabacay Jarmalka 1, Barth wuxuu ka walaacsanaa in codkii asalka ahaa ee Bawlos uu lumi doono oo lagu aasi doono deeqda waxbarasho iyo dhaleecaynta qarniyo badan.
Hadalkiisii ​​Rooma 1, Barth wuxuu yidhi injiilku ma aha wax kale, laakiin waa eray asal u ah wax walba, waa eray marwalba cusub, waana farriin ka timid xagga Ilaah oo u baahan una baahan iimaan iyo in , haddii si sax ah loo akhristo, waxay soo saari doontaa aaminaadda ay sii deynayso. Injiilku wuxuu yiri Barth wuxuu ubaahanyahay kaqeybgal iyo iskaashi. Qaabkaas, Barth wuxuu muujiyey in Ereyga Eebbe uu ku habboon yahay adduun lagu laayay oo jahwareer ka keenay dagaal caalami ah. Mar labaad warqaddii ay u qortay reer Rooma waxay ahayd xiddig dhalaalaya oo muujisay jidka looga baxo qafis mugdi ah oo rajo jab ah. Faallooyinka Barth ee ku saabsan Waraaqda ku socota dadka Roomaanka waxaa si qumman loogu sharaxay inuu yahay bambo lagu soo tuuray goobta ay ku sugnaayeen khubarada falsafada iyo fiqiga. Mar labaad, Kaniisadda ayaa loo beddelay warqaddii ay u qortay reer Rooma, taas oo xirtay akhristaha aaminka ah.
Luther ayaa badalay fariintan. Waxay isu beddeshay Wesley. Waxay isu beddeshay Barth. Haddana wali dad badan ayey maanta beddelaysaa. Iyaga ayaa Ruuxa Quduuska ahi u beddelaa akhristayaasheeda isagoo leh aamin iyo hubaal. Hadaadan aqoon xaqiiqdan, waxaan kugula dardaarayaa inaad aqriso oo aad rumeeyso Warqadda loo yaqaan Romanka.